वकील एक विशेषज्ञ को क्षेत्र मा व्यवस्था छ । उहाँले थाह छ, नियमहरू र विनियम, तिनीहरूलाई कसरी प्रयोग गर्ने थाह छ र सिकाउन सक्छन् तिनीहरूलाई को बुनियादी अरूलाई. एक विशेषज्ञ छ को क्षेत्र मा जो व्यवस्था, लिन सक्छन्, कुनै पनि कानूनी स्थिति एक वकील देखि एक न्यायाधीश छ । यो आवश्यक छ प्राप्त गर्न एक व्यवस्था डिग्री छ ।
को उद्भव, यो क्षेत्र को ज्ञान मा देखा परेको छ, पुरातन रोम.
यो थियो कि यहाँ देखा पहिलो प्रतिनिधिहरु को व्यवस्था — कारतूस
तिनीहरूलाई विवाद को संकल्प र न्यायिक गतिविधि थियो अवधारणा अप्रत्यक्ष र राख्नु को काँध मा पूजाहारीहरू. को आगमन संग कारतूस कानूनी ज्ञान तेजी विकसित गरेको छ । पहिलो, यो शक्ति को निर्णय राख्नु को काँध मा, राजा र टाउको अमेरिका ।
उद्योग विकसित छ, देखा रूपमा रक्षक र. जन्म थिए कोर्ट र न्यायिक प्रणाली । समय व्यवस्था छ मा विकसित फराकिलो उद्योग छ । आधार लागि कानुन थियो, धर्म, बस आज्ञा बाइबल देखि पहिलो थिए नियमहरू.
तिनीहरूले बनाएको नियम, जो मानवता निम्नानुसार यस दिन गर्न
व्यवस्था को विकास ढिलो भएको छ, नियमहरू को परिचय द्वारा जार पत्रुस पहिलो छ । गर्न वृद्धि दिनुभयो विकास को कानूनी क्षेत्र हाम्रो देश को. थियो त, एक अदालतले क्रान्ति । बस पछि यो हामी मिल्यो एक कानूनी संरचना, बन्द गर्न, आधुनिक छ । आजकल, यो व्यवस्था एक व्यापक शाखा को ज्ञान र क्षमताहरु छ । यो पनि समावेश सम्पूर्ण न्यायिक प्रणाली, ज्ञान को कानून र कानूनी मान्यता र तरिका को एक तिनीहरूलाई नियन्त्रण एक स्पष्ट चलान रूपमा व्यक्तिहरूलाई र सङ्गठित संरचना छ ।
लेखा रिपोर्ट - निःशुल्क व्यवस्था शब्दकोश